Landa iphakethe le-Airbus A330 Multi-Livery FSX & P3D - Rikoooo
Play 101 052
Umbhali: Ithimba le-Project Opensky, uThomas Ruth, liphinde liphindwe nguLuis Quintero
Leli qoqo eliphelele lama-A330 Amamodeli adalwe nguThomas Ruth nge-VC. Le qoqo ine-200, -200F, -MRTT kanye -300 ehlukahlukene ye-A330. Sicela uqaphele ivolumu i-2 eyenziwe yi-Team Opensky Team ayikho i-VC
Lonke pack ine siko soundsets ngoba General Electric CF6-80E1, Pratt & Whitney PW4000-100 series & Rolls-Royce Trent 700 chungechunge izinjini. Lokhu soundsets adalwa André Silva no-Emil Serafino (nge imvume ukusebenzisa soundsets wakhe kule amaphakheji).
A aircraft.cfg ukuhlelwa ngokugcwele nemibono oklanywe ngokukhethekile futhi wezimpahla-iloli / jetway amakhodi wawuhlanganisa. Woza FMC, GPWS futhi i izinhlelo AutoBrake owadalwa Garrett Smith, uJimmy Wong Math Smith, futhi Project Opensky ngokulandelana.
Lokhu pack ine 107 Good-Quality liveries kwasakazwa singene ezahlukeneyo ezine.
ISEXWAYISO, iphakethe ivolumu 2 (I-A330-200 / 300 Project OpenSky) ayihambelani 64bits kanjalo nge Prepar3Dv4 +, ngeke ifakwe Prepar3Di-v4 +
Yokuxhumana International Airways
cha P3Di-v4 + futhi ayikho i-VC) :
cha P3Di-v4 + futhi ayikho i-VC)
I-Airbus A300B1 / B2 / B4 FSX & P3D